Nagu saabsan - Shandong Huayi metal materials Co., Ltd.
Qalabka birta Shandong Huayi Co., Ltd., oo la aasaasay 2020, wuxuu leeyahay xuquuq soo dejin iyo dhoofinta madaxbannaan, badiyaa suuqa dibedda. Shirkadda ay ku xiran tahay, Shandong Liaocheng Jinquan Steel Co., Ltd., waxay inta badan ku jirtaa suuqa gudaha, iyada oo macaamiishu ay joogaan dalka oo dhan. Muddo sanado ah, waxay xiriir wanaagsan oo iskaashi la yeelatay shirkado ku jira warshado kala duwan sida warshadaha kiimikada, wax soo saarka mashiinnada, warshadda korontada, iwm, waxayna urursatay aqoon xirfadeed oo qani ah, Ka dibna si fiican bay ugu adeegi kartaa macaamiisha. “Marka hore tayo leh, kaarka deynta, marka hore macaamilka, daacad-ku-saleysan” mabaadi’da hawlgalka ee horumarinta suuqa iyo kasbashada kalsoonida sare ee macaamiisha.
Qalabka birta ee Shandong Huayi Co., Ltd. ayaa inta badan ku hawlan iibinta jumlada iyo tafaariiqda, badiyaa waxay iibiyaan biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn, bir aan badnayn, saxan bir ah, baarka iyo qalabka dhismaha, rakibidda qalabka iyo alaabada kale, iyo bixinta adeegyada ka shaqaynta birta: Qiyaasta birta, birta goynta saxanka, daaweynta dusha iyo ka baaraandegidda kale sida waafaqsan shuruudaha macmiilka.
Sida laga soo xigtay jawaabta guud ee macaamiisha gudaha sanadihii la soo dhaafay, tayada alaabtayada ayaa gaarsiisan heerka, adeeggu waa heerka koowaad, annaguna waxaan nahay alaab-qeybiye tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo.
Shirkaddayadu waxay ku taal Liaocheng City, Gobolka Shandong, oo ah suuqa birta ugu weyn Shiinaha. Waxaa loo yaqaan "caasimaddii tuubooyinka birta". Bariga, waxaa ku yaal dekadaha ganacsiga shisheeye ee labaad ee ugu weyn Shiinaha, sida dekedda Qingdao, Dekedda Rizhao, dekedda Tianjin, iwm oo leh waddooyin badan oo tareenno iyo waddooyin waaweyn oo dhex mara magaalada Liaocheng, gaadiidku aad buu ugu habboon yahay. Sidaa darteed, waxaan ku siin doonnaa badeecooyin leh tayo aad u sarreysa iyo qiimo macquul ah, Si aan adiga kula yeelanno xiriir ganacsi oo wanaagsan.